NextMapping | Boky mpitarika
Cheryl Cran no mpanoratra ny boky fampivoarana fitarika fito ao anatin'izany ny bokiny vaovao, “NextMapping ™ - Miandrasa, mivezivezy ary mamorona ny ho avin'ny asa ”Ary koa ny mpivarotra azy“Ny zavakanton'ny fanovana - Fiovana fiovana anaty tontolo misy haingam-pandeha”(Wiley 2015).
E-Boky vaovao sy publication hafa ho avy tsy ho ela.
Azo alaina izao! Alao ny kopinao androany!
NextMapping ™: Miandrasa mialoha, mivezivezy ary mamorona ny hoavin'ny asa
Andiany faharoa miaraka amin'ny fampahalalana vaovao sy ny boky fampiasa miaraka amin'ny efa ho vonona amin'ny 4 febroary 2020. Ity dikan-teny ity dia mamela ny olona tsirairay, mpitarika sy ekipa hamorona ny ho aviny ary hamoaka ny 'What Next.'
Ny hafainganam-pandehan'ny fanovana dia avo folo heny noho ny folo taona lasa ary 40% an'ny Fortune 500 dia tsy ho hita ao anatin'ny folo taona ho avy. Misy maika ny filoham-pirenena, ekipa ary mpandraharaha mba hikaroka mafy sy hampihatra paikady hamoronana ny ho avin'ny asa.
Ny zavakanton'ny fanovana
Ao amin'ny 'The Art of Change Leadership - Fiovana Fiovana Ao Amin'ny Tontolo iainana haingana,' Mandehandeha mamaky ny mpamaky aho ny lalan'ny fampandrosoana ny fanovana ny fomba ho lasa mpitondra fanovana izay mamorona ny valin'ny rahampitso. Ao anatin'izany ny fomba hahitana ny fomba mpitarika ny fanovana anao manokana, sy ny fomba hananana hery sy famporisihana ny hafa mba hanova ny mpitarika ihany koa.
Barnes sy Noble
Manana tolotra manokana ho an'ny baiko marobe isika raha mandefa ny habetsaky ny vola eto ambany handefasa mailaka anay fotsiny izahay info@nextmapping.com miaraka amin'ny porofon'ny fividianana ary dia hanome anao ny bonus anao izahay!
Ny fomba 101 hanaovana famokarana X, Y sy Zoomers faly any am-piasana
Alaivo sary an-tsaina ny taona 2020 Inona no hoatran'ny orinasa? Ahoana ny fomba fiovan'ny orinasa noho ny fiantraikany amin'ny ankapobeny? Ao amin'ity boky ity, consultant sy mpanoratra Cheryl Cran, CSP dia manome fomba 101 ho an'ny mpitondra sy ny tompona orinasa mba hampitombo ny firotsahan'ny mpiasa sy fahafaham-po amin'ny asa. Ny fikarohana dia mampiseho fa ny Gen X sy Y dia miandry ny hahita asa any an-kafa raha tsy faly miasa izy ireo. Vakiana haingana sy mora vakiana ary toro-hevitra mahasoa maro.
Fifehezana mpitarika amin'ny vanim-potoana niomerika: Ahoana ny fitarihana ny fanovana, ny fanovana ny olona ary ny fitomboan'ny orinasa
Amin'ny maha-mpitarika anao dia mitombo ny filàna fahaizana manatsara. Ny mpitondra ho avy dia mpitarika fiaraha-miasa ary ny fomba fitantanana sy fibaikoana fahaiza-mitarika taloha dia tsy manapaka azy intsony. Ny mpitondra ankehitriny dia mila mahay mandanjalanja sy mahay mandanjalanja ary mpitondra fiovana. Amin'ity boky ity dia omena ny paikadim-pampandrosoana ho an'ny fitarihana ny lafiny rehetra amin'ny maha-mpitarika ao anatin'izany ny fahaiza-mitarika miorina amin'ny hery toy ny fifandraisana, fitantanana fifandirana, fifampiraharahana amin'ireo ekipa lavitra, fampitomboana ny haitao teknolojia ary maro hafa.